Lemma Megersa iyo Cabdi iley oo shir dhexdii isugu Hanjabay. | ogaden24
Lemma Megersa iyo Cabdi iley oo shir dhexdii isugu Hanjabay.
Jan 22, 2017 - Aragtiyood
Wada hadalo magaalada Addis ababa loogu Qabtay Labada Horjooge ee maamulada Somalida iyo kan Oromada oo kusaabsan dagaalada dhiiga badani kudaatay ee kasocda deegaamada 2-da bulsho wadaagaan ayaa ku dhamaaday Fashil Hanjabaad.
Kulamada oo si rasmi ah u bilawday 18-kii bishan ayaa soo dhamaaday isla Fiidnimadii 19-ka bisha kadib markii Labada Horjooge ay shirka isku dhex Aflaadeeyeen, iyaga oo midiba kan kale uu ku eedeeynayo inay maleeshiyadiisu dagaalka bilawday masuulna katahay.
Wada hadalka Labada Horjooge oo uu dhex dhexaadinayay Agaasimaha Kililada ee xafiiska Xayle Maryan ayuu Lemma Megersa oo ah madaxa is maamulka Oromadu ugu Hanjabay Cabdi iley inuu barqo kaqabsan doono magaalada Jigjiga, taasi oo keentay in Cabdi iley isna dhinaciisa ku Hanjabo inuu ilaa iyo Nazeret cagta marin doono Oromada kunool.
Muranka iyo Hanjabaada aan macnaha lahayn ee Labada Horjooge oo marka laga reebo shakhsiyaadka dhex dhexaadinayay ay dusha kala socdeen saraakiisha Tigreegu, ayaa ugu dambays lagu kala dhaqaaqay Habeenimadii 19-kii bisha ee sabtidu soo Galaysay iyada oo aan wax Natiija ah laga gaadhin.
Dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka Labada maamul ayaa wali sii socda waxayna kufidiyaan deegaamo cusub oo bulshoyinka Oromada iyo Somaalidu wada dagan yihiin, taasi oo keentay in dad badan oo Labada dhinac ah oo isugu jira Xoolo dhaqato iyo Beeralay inay dhulkoodii isaga barakacaan.